GOORTA GOYNTA GEEDAHA: GOOYO KUWA BILOWGA AH - BEERTA
Dhirta midhaha leh ee geedaha ayaa ah wax lagama maarmaan ah. Hadafkiisu waa inuu hagaajiyo dhirta, si kor loogu qaado koritaanka jihada saxda ah iyo in lagu gaaro fruiting waxtar leh. Gooyaa ma jirto wax is hortaag ah, laakiin lid ku ah - waxay ku sii socotaa shuruucda dabeecadda, iyaga oo ku tiirsan. Dhab ahaantii, waa habdhaqan nidaamyada dabiiciga ah, oo ah mid ka mid ah waxqabadyada daryeelka beeraha beeraha lagu beeray oo aan u oggolaan inay u ordaan duurjoogta.
Thanks to manjooyin karti leh, laan kasta oo geed ah wuxuu helaa qadarka iftiinka iyo meelihiisa gaarka ah, iyada oo aan wax faragelin aheyn dadka kale. Sidoo kale manjooyin waxaa loo isticmaalaa sida daaweynta cudurada kala duwan, jebinta sababo dabiiciga ah.
Ugu dambeyntii, jarida geedaha dhintay dhintay, waxaad ka xoreysaa geedkii miisaanka xad-dhaafka ah oo u oggolow in ay ku hagaajiso dadaalkeeda koritaanka iyo horumarka, waxaadna ka badbaadinaysaa halista ah jebinta laamaha qalalan, taasoo burburin karta waqtiga iyo goobta khaldan.
Maqaalkani, waxaan eegaynaa noocyada manjooyin geedo khudradeed, ogow marka ay ka wanaagsan tahay in ay iyaga iska dhigaan - guga ama dayrta, xagaaga ama xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale baro fiidiyowyada kuwa bilowga ah.
Manjada beerta waa nidaam muhiim u ah gobolka ee dhirta iyo tayada dalagga. Wuxuu xakameynayaa geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka dhexdiisa, dib-u-habaynaya kheyraadka nolosha iyo in lagu wareejiyo qaybaha la rabo ee geedka.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad wax dheeraad ah ka barato kudka shinbiraha, boodhka, khudaarta, tufaax, pear, cherry, cherry macaan.
Iyadoo wadajir ah hababka kale ee agrotechnik ah Gooyo dhirbaaxada oo dhan waxay ka kooban tahay dhinacyada geedka:
Xilliga jiritaanka, geedka miro ayaa si joogta ah isu bedelaya, sii kordhaya xawaare kala duwan waqtiyo kala duwan, hogaaminaya xoogagga:
si loo xoojiyo nidaamka xididka;
on kordhinta cagaaran;
for ubax iyo fruiting;
in laga ilaaliyo cudurrada;
diyaarinaya mudo xasilooni iyo wixii la mid ah.
Da'diisu, xaalad jireed, xaaladda caafimaadka ayaa isbeddela. Marka la eego, yoolalka "fara-gelinta qalliinka" waa ka duwan yahay, nooca xayawaanku wuxuu ku xiran yahay iyaga.
Iyada oo ku saleysan hadafyada la qorsheeyay, wadaag lix nooc oo xoqin ah:
Dib-u-furid - wuxuu saaraa gabowga iyo sii wadaa nolosha.
Hannaan - Iskuday muuqaalka taajka.
Xeerarka - wuxuu nidaamiyaa fruiting.
Soo kabashada - wuxuu keenaa geedka tignoolada.
Nadaafada - Wuxuu bogsiiyaa geedka iyo baabi'iyaa culayska xad-dhaafka ah.
Taageero - Cusbooneysiin iyo abaalmarin awood leh.
Aynu sii degganaano nooc kasta.
Manjooyin habboon ayaa sidoo kale muhiim u ah duurka miro: currants, gooseberries iyo raspberries.
Ka dib marka geedku bilaabo inuu midho u dhasho, ka dib 2-3 sano kadib waa lagama maarmaan gaabin laamood aad u dheerin "toosi" burooyinkeeda cirridka, xaddidaan koritaanka laanta, sameysid taaj, ka samee dhirta laga soocay jajabyada dhintay waxayna ku siiyaan fursad ay dib ugu soo kabtaan. Qiyaastan waxaa sidoo kale lagu dabaqayaa haddii dhaqdhaqaaqa ubaxu hoos u dhacay.
Intaa waxaa dheer, dhacdo noocan oo kale ah waxay si weyn u hagaajineysaa sheekada muuqaalka geedka. Geedo soo-baxaya waxay ku lug leedahay ka qaadista dhagxaanta iyo laftirka laanta iyo caleemaha aan loo baahnayn, laga soo dhajiyay meesha saxda ah si ay u sameeyaan lafaha qalfoofka iyo lafaha yar-yar. Nidaamka noocan oo kale ah ayaa la samayn karaa labada dayrta iyo dhammaadka jiilaalka iyo bilowga guga qiyaastii saddexdii sanoba mar.
Iyadoo caawimaadda manjooyin qaabeyn ah, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu u muuqdaa muuqaalka geedka, culeyska qaybta qalfoofka, wuxuuna u oggol yahay warshad si siman u kobcisa.
Ma taqaanaa? Waxaa la yaab leh in haddii nidaamka la fuliyo Febraayo, laamuhu waxay aadi doonaan korriin degdeg ah, laakiin bisha Maarso Gooyo ayaa gaabin doonta geeddi-socodkan.
Sameynta bartilmaameedyada leexinta:
dardargelinta bilawga ah ee ubaxyada;
in la hubiyo helitaanka unug ee qorraxda taajka;
Helitaanka helitaanka laanta galka iyo daryeelka.
Waxay sameeyaan manjooyin isku dhafan oo ku saabsan dhogorta, 3-5 sano kadib markii la beeray.
Xayeysiinta rasmiga ah ma aha dhacdo hal-mar ah, iyada oo gacan ka heleysa farsamadan dhowr sanadood taajkii geed ayaa si tartiib ah loo sameeyay iyada oo si isku mid ah loogu dhigo laanta iftiinka laydhka oo dhan qaybta qalfoofka geedka. Geedka weyn ee lumay laanta laf-dhabarka oo sabab u ah shil, da ', ama dhimasho, ama uu soo iibsaday fayras ayaa sidoo kale u baahan kara.
Isticmaalidda Qalabaynta Sharciga taajkii hore loo sameeyay waxaa lagu keydiyaa qaabka la doonayoLaamaha ayaa la siiyaa iftiiminta labbiska, caleemaha caleenta ayaa la saaraa. Iyadoo caawimadeeda, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu ilaaliyaa dheelitirka koritaanka iyo dhalidda miraha waxayna abuurtaa xaalado cusboonaysiinta qoryaha iyo xoojinta koritaanka.
Waxaa la qabtaa dabayaaqadii Febraayo ilaa Abriil, iyo sidoo kale laga bilaabo Agoosto ilaa Sebtembar, waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa beeraha warshadaha.
Ma taqaanaa? Maraqyada iyo jeeriga, xayawaanka iyo roodhida, fersken iyo yicibta waxay ka tirsan yihiin jilibka Prunus waxayna yihiin qaraabo. Waxaa sidoo kale ku jira cherry shimbir.
Haddii dhirta ay soo gaarto sababo macquul ah, gooyaa waxay gacan ka geysaneysaa dib u soo celinta suurtagalnimada horumarin dheeraad ah. Iyada oo caawinaadeeda u samee taajka aqbalaadda, ku guuleystaan ​​dheelitirka qaybaha qaybihiisa, xakamee tirada caleemaha sii kordhaya iyo hagaajinta iftiinka. Ka dib marka ay wax ka-qabashadaas jirto, buuxsamiddu waxay ku soo noqotaa taajka, waxay awood u leedahay inay koraan oo ay midho u dhasho.
Inta lagu jiro dhacdada, ka saar cutubka bukaanka ah ama jabay. Codso sidoo kale:
in dhirta ay ku dhaawacmeen meeldhexaad ama qabow;
haddii geedka aan la duufin mudo dheer oo hadda la haysto qaab aan loo dayacin;
marka kor loo qaado taajka xad-dhaafka ah, oo soo farageliyay dhirta deriska ah iyo xannibaadda miisaanka iyo daryeelka lagama maarmaanka ah;
haddii iftiinka uu ku adkaado inuu jebiyo mergooyinka cufan ee taajka iyo laanta hoose ayaa ku filan qorraxda.
Baro waxyaabaha ku saabsan miro-dhalashada ee geedka tufaaxa ee guga iyo dayrta.
Geedo nadiifinta waxaa loo sameeyaa sida daaweynta qorshaysan iyo sida ambalaaska. Sida tallaabooyinka ugu badan ee tallaabooyinka, waa in loo sameeyaa sida loo baahan yahay marka uu dhirta jiran yahay, la helay qalajiyo ama laamo jabay, ama qallajin.
Tani waxaa la sameeyaa wakhti kasta oo sanadka ah, caqabadda kaliya waa qabowga, iyo waqtiga ugu fiican waa bilowga xagaaga, marka geedku soo tooso. Nidaamka sanka ee sanadka oo joogto ah iyo mid sanadle ahba wuxuu hagaajin doonaa caafimaadka geedka, siinayaa muuqaal muuqaal leh, khafiifinta taajka, ka hortagga caabuqyada faafa iyo fungal.
Waa muhiim! Si looga fogaado faafidda jeermiska, ka saar laanta cudurka qaba, jeermi qalabyada, kana saar meesha qaybaha cudurka qaba sida ugu dhakhsaha badan.
Waa in la xusuustaa in qaabsocodka xagjirka ah ee xad-dhaafka ah uu saameyn ku yeelan doono cawaaqibka qaabka taajka aad u weyn. Waa in sidoo kale loo tixgeliyaa da'da geedaha iyo cabbirka.
Gubashada Dayactirka si joogto ah loo qabto inta lagu jiro jiritaanka dhirta. Waxay ka caawisaa taageeridda korniinka iyo caafimaadka, iyo sidoo kale fruiting, raacitaanka hadafyada soo socda:
ma sii daayo laamaha sii kordhaya ee ka baxsan xudduudaha taajka la sameeyay;
waxay ku jirtaa taajka xaalad u egtahay qorraxda;
ha soo bandhigin laamaha waaweyn;
si ay uga takhalusaan laamihii qalfoofka ee caleemaha yar yar ee u xanuunsada;
ilaaliyaan caafimaadka iyo codka geedka ee koritaanka firfircoon iyo midhaha xasilloon.
Go'aaminta qodobada iyo waqtiga xadka ee manjooyin
Caanaha ugu weyn ee ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu ku dhacaa wakhtigii uu dhaxantii hore u dhaaftay, iyo xilliga sii kordhaya ee aan weli bilaabin, taas oo ah, dhammaadka February iyo inta lagu jiro guga oo dhan. Inta lagu jiro muddadan, uma baahnid inaad ka baqatid in uu barafku dhaawici doono dhirta cusub ee la gooyey, isla mar ahaantaana ma waayi doono nafaqooyinka iyo qaybaha gooyo.
Xaaladaha qaarkood, suurtogalnimada in la gooyo ilaa xilliga ubax.
Ma taqaanaa? Magaalada magaalada Piedmont, Talyaaniga, waxay koraan geedo aan caadi ahayn. Waxay ka soo baxday duufaan, dusheeda oo kor u soo baxday sida jidka a cherry loo keenay. Kobcinta, cherry dillaacay iyada oo jir ah ee bukaa, oo hadda waxay yihiin mid, iyada oo ay iska haray.
Guga hore waa wakhtiga geedo geedo waaweyn la isku duro. Marka ugu horeysa ee "liqo" arrintaan waa geedo tufaax ah, oo run ahaantii abuur abuur ah. Miro dhagax ayaa la bilaabaa wax yar ka dib.
Qodobada go'aaminta ee arrintan ama nooca manjooyin waa:
xaaladda jiritaanka miro.
Haddii dhirta lagu beeray dhulka dayrta, waxay u baahan tahay in la saxo ilaa uu casiirku tooso. Tani waxay khuseysaa labada miraha iyo miraha dhagax. Haddii dhaxan ay si xun u waxyeeleeyeen laanta, waxay macno u tahay sugitaanka waqtiga dhaawaca si cad loo tilmaamay.
Geedaha Apple - dhaqamada ugu xasilloon, oo aan saameyn ku yeelan shuruudaha aan caadiga ahayn. Shaqada horumarinta, dib u habeynta iyo saxitaanka waxay ku bilaabmaysaa iyaga, waxayna ku dhammaataa iyaga.
Waa muhiim! Haddii geedka tufaaxa la jeexjeexo budada budada ah, laamaha jirran waa la saaraa oo la burburiyaa xagaaga.
Lafaatiirta tufaaxa iyo isteroberi ee barafku waxay u nugul yihiin barafka, dhammaadka nooca dhaawaca ayaa ka wanaagsan in la nadiifiyo badhtamaha bisha May.
Iyada oo cherry, cherry iyo tubta habka asaasiga ah waa sida soo socota:
jeeriga xooggan ama geedka waa in la gooyaa goosashada ka dib;
haddii cherry uu daciif yahay, gudniinka jiilaalka ayaa caawin doona - tani waxay kicinaysaa koritaanka caleemaha cusub ee gu'ga;
manjooyin waxaa lagula talinayaa inta lagu jiro geedi socodka goosashada, midba midka dhexe ama dhammaadka Juun.
Caleemaha jilbaha xagaaga, si ay u badbaadiyaan awoodda dhirta waxyaabo badan oo muhiim ah. Geedka dhirta xilliga dayrta - caafi.
Waa muhiim! In kiiska marka laamaha la socdaburburay ka yar miisaanka barafka, ama barta Isku duubka inta lagu jiro duufaanka, waxaad u baahan tahay inaad samayso afduub sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaa suurtagal ah in la bilaabo geedo miraha guga guga ka dib markii uu barafku ugu weynaanayo, laakiin waxay noqon doontaa mid saxan haddii ninkii beerta ka shaqaynayay waqti sugaya, marka socodka dheecaanku uu bilaabmayo.
Si loo ilaaliyo tayada kala duwan ee dhirta, bannaanka u isticmaalaan tallaalka ah in la samayn karaa guga iyo xagaaga siyaabo kala duwan.
Waqtigaan waxaa loo tixgeliyaa midka ugu haboon, sababtoo ah unugyada dhirta xilligaasba waxaa loo diyaariyey hababka ku saabsan inay bilaabaan inay ka dhacaan iyaga. Goynta xaaladahan ayaa sida ugu dhakhsaha badan u bogsiin doonta - dabcan, haddii si sax ah loo soo saaro oo loo saxayo. Haddii nidaamka habboon ee loo baahan yahay, waa suurtagal in la sugo, ama xitaa sannad kale la helo.
Sidaa daraadeed, sharciyada aasaasiga ah ee ay tahay in lagu raaco ninkii beerta oo idil:
Waqtiga ugu horeeya ee la gooyo goynta waa wakhtiga dhaxan ee ugu weyn ee la tagay, laakiin waxaa fiican in la sugo xilliga diyaarinta bilowga dhaqdhaqaaqa juuska;
Gooyadu waxay ka sarreysaa indhaha koraya taajka dibedda ah, taas oo ka dhigaysa mid sahlan iyo xitaa gudaha gudaha dibedda.
laamaha qalfoofka, oo jirku uu sii socdo, sii dheeraado;
geedaha daciifka ah ayaa la gooyaa gaaban, iyagoo ka tegaya laba ama saddex indhood, caleemaha xooggan ee siddeed indhood iyo ka badan.
Fikradda "manjooyin xagaaga" waxaa ka mid ah farsamooyin dhowr ah, oo la qaaday caleemaha cagaaran, kuwaas oo aan haysan waqti ay ku helaan jilif, ee loogu talagalay in lagu dhejiyo taajka si loo helo iftiinka qoraxda:
nip - si ay u koraan caleemaha ka soo burooyinkeeda toosan, kuwaas oo yeelan doona waqti si loogu diyaariyo jiilaalka;
dalool pin - Si loo horumariyo lafaha ilma-galka si buuxda oo loo sameeyo dhuxul kaas oo gacan ka geysan doona kor u qaadista iyo hagaajinta midabka;
jabinta - Qaadashada qiimaha aan qiimo lahayn ee taajka caleemaha yar yar, si fudud ayaa loo wareejiyaa oo uma baahna in la shaqeeyo;
burburka - Marar dhif ah ayaa loo qabtey soo dhaweynta si loo siiyo laamaha sii kordhaya jihada la rabo;
xoqidda - Si aad u hesho boog ubax u dhow bilowga biloowga, horay sannadka markii uu bilaabay inuu koro.
Sidaas darteed, manjooyin xagaaga ee geedo midho leh ayaa fududeynaya shaqada guga iyo dayrta, waxay ka caawisaa badbaadinta nafaqooyinka gudaha dhirta iyo hagaajinta midhaha.
Ma taqaanaa? Naqshadayaashu waxay bartay inay ka sameeyaan walxo kala duwan oo ka soo baxaya geedo sii kordhaya, tusaale ahaan alaabta guriga, iyagoo isticmaalaya farsamooyin kala duwan, oo ay ku jiraan manjooyin.
Manjooyin dayrta ayaa badanaa loo sameeyaa ujeedooyinka caafmaadka; ama haddii loo qorsheeyay in ay dib u soo noolaato geedka guga, ka baxso xiriirka ilaalinta. Farsamadani waxay sidoo kale u fiican tahay waqtigaan sanadka ee tufaax aad u da 'yar oo la dayacay. Geedka dhoobada xilliga dayrta waxay bilaabataa markaa marka caleen dhaco.
Waayo, manjooyin goynta canabka ah ayaa lagu fuliyaa guga, xagaaga iyo dayrta.
Haddii aad ka gooyay dakhliga sanadlaha ah, dhaxan wuxuu dhaawici karaa maaha kaliya meesha gooyuhu ku yaal, laakiin sidoo kale waa meel hagaagsan oo ku wareegsan, waana tan dhab ahaanna maahan bogsasho nabdoon. Geedka Tani waxay noqon doontaa adag tahay xilliga qaboobaha, taas oo u xun kelyaha guga. Khatartu waa ka saraysa, waqooyiga beerta ayaa ku yaal.
Si kastaba ha noqotee, haddii baahida loo qabo manjooyin nadaafadeed ayaa soo ifbaxday, tixgelinta kor ku xusan waxay lumisaa xiriirkooda, calaamadaha muhiimka ah ee muhiimka ah halkan, sida ay ku yiraahdaan daawada. Geedka uu cudurku saameeyo waa in la daaweeyaa si uusan infekshinu u sii faafin, sidoo kalena ma tago dhirta deriska ah. Xaaladaha noocaas ah, qaybaha la kala jaray waa in la gubaa.
Dhirta miraha si fiican iskuma xiriiraan gawaarida xilliga dayrta, qaarkoodna way dhiman karaan, ama aad u xanuunsan karaan kadib - tusaale ahaan, boodh, cherry ama pear. On the saplings yar yar, sidoo kale waxay saameyn doontaa ma aha habka ugu wanaagsan.
Geedo xilliga qaboobaha ayaa ku haboon gobollada koonfurta, halkaas oo dhaxantu ay dhif iyo naadir yihiin khafiif ah. Way fiican tahay maxaa yeelay:
dhirta waxay helayaan walwal yar marka ay hibernate;
ka goynta ayaa ah mid sax ah oo tayo sare leh;
waxay ka caawisaa in aan jirin caleemo dhammaan, iyo dhammaan laamaha waa mid aad u muuqda.
Nidaamka waxaa lagu sameeyaa maalmaha qaboobaha kulaylka, marka dibeddu aanay ka yareynin -5-7 ° S - marka uu qabow yahay, qoryuhu wuxuu noqdaa mid jilicsan.
Marka geedku uu waxyeelo u keeno dabayl xoog leh, oo ka yimaada laanta ama culeyska culus ee barafka, iyo sidoo kale, wuxuu ku hanjabaa kala qaybsanaan ama jab, ninkii beerta ka shaqeeyaa maahan inuu weyddiiyo in la gooyo. Waa lagama maarmaan in la gooyo, kaliya waa lagama maarmaan in la sugo fursada ugu horeysa, taas oo ah - hoos u dhac ama maqnaansho dhaxan.
Maxaa la sameeyaa kaddib marka la jarayo
Gudniinka oo dhan wuxuu isu saaraa boogta boogta oo ka soo baxaysa qoyaan. Sidoo kale, dhab ahaantii, albaab furan oo loogu talagalay dhammaan noocyada cudurada. Qaybaha yaryar waxay ku bogsan karaan naftooda, laakiin meelaha waaweyn, laga bilaabo 2.5 cm dhexroor, waxay u baahan yihiin daaweyn.
Waa muhiim! Fuluubyada yar yar iyo khudaarta cagaaran, xataa xitaa dhaawacyada ugu yar waa in la jaraa marka la beeray oo la jarjaray, ilaa geedku uu xoog badan yahay, kornaayo. In khudaar caan ah iyo miro guduud ah, xaleef yar oo aan la sii wadi karin.
Xaalad walboo si qoto-dheer u sawirta ama shabakad, kaas oo ka dhigay gooyo, xaalad kasta, dusha sare ka dib ma noqon doonto mid siman, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ku nadiifiso mindi beerta fiiqan. Markaas - daaweynayaan bogsashada dhaawaca gaarka ah; tusaale ahaan, garoonka beerta ama rinjiga ku salaysan.
Ma isticmaali kartid rinjiga kale, marka lagu daro saliidaha - dareeraha ay ku jiraan waxyaalahoodii, saamaynta xun ee geedka, gashan dharka ayadoo loo marayo cutub cusub. Wixii codsi ah, isticmaal shaashadda, buraashka ama guntinta.
Boogta la riixay waxay bilaabmaysaa inay ka bogsato cidhifyada, iyaga oo samaynaya kabaha lo'da iyaga, ka dib markii kalluumeysiga kordho xawaaraha 2-3 cm sanadkii, taas oo ka duwan 1 cm, haddii aan la shaqeynin.
Waxkasta oo aad ku sameysid geed, xusuusnow in uu yahay noolol nool oo waxyeeleyn kara haddii aadan aqoonin ku filan. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato habka iyo sharciyada ay ku dhaqanto hab-nololeedkooda, oo faragalin ku sameeya, fahamsan waxa aad ka filanayso ka-hortagga. Oo geedkii oo dhan wuxuu u ekaa sidii hodantin kasta oo kale, wuuna mahad naqaa;